Rag Sweden ka soo jeeda oo lagu xiray Turkiga – waxay ku biiri rabeen Daacish - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Labo jihaadiyiin ah oo ku sugan Suuriya. sawir: Foto: Khalil Hamra´/ AP
Rag Sweden ka soo jeeda oo lagu xiray Turkiga – waxay ku biiri rabeen Daacish
La daabacay torsdag 31 mars 2016 kl 15.05
Afar nin oo Sweden ka soo jeeda ayaa lagu xiray dalka Turkiga. Sida ay sheegeyso xog uu helay elefishinka SVT Nyheterna raggan waxay ku jeedeen Suuriya si ay ugu biiraan kooxda argagaxisada ah ee Daacish.
Sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda Sweden raggan la qabtay saddex ka mid ah waa muwaadiniin halka kan kale uu heysto deganaanshaha waddanka. Raggan ayaa Turkiga lagu xiray bilowgii bishan mars.
Wasaaradda arrimaha dibadda Sweden ma xaqiijin raggan in ay u socdeen Suuriya iyo in kale.
Sida uu warieyey telefishinka SVT Nyheterna ruux ka tirsan qoyska mid ka mid ah ragga la qabtay ayaa iskudyey in uu ka joojiyo socdaalka. Shaqssigaan ayaa xataa u socdaal Turkiga si uu ninka ay qaraabada yahiin uga joojiyo qorshahiisa ah ku biirista argagaxisada.
Berrito oo Jimco ah ayuu Sweden ka hirgalayaa sharci cusub oo mamnuuc cinqaab lagu muteysto ka dhigaya u socdaalka argagaxisada. Sharciga cusub ayaa qaban doona ruuxa kasta oo lagu helo in uu u socdaalay ama u socdaali rabay argagaxisada oo ujeedadiisana ay aheyd in uu geysto, diyaariyo ama uu tabobar u qaato faldembiyeed argagaxiso.
Waxii ka horeeyey kowda bishan mars shaqsiyaad gaaraya 300 ayaa ka socdaalay Sweden oo ku biiray dagaalada argagaxisadu ka waddo Ciraaq iyo Suuriya, sida laga soo xigtay hey’adda nabadsugidda Sweden Säpo.
135 ruux oo ka mid ah tiradas ayaa Sweden dib ugu soo noqday halka 44 ka mid ahi ay dagalaada ku dhinteen.
Shaqsiyaadka argagaxisada lagu tuhmo oo lala xiriiriyo dembiyo kale